Hongee Godina Booranaatti mudateen loon du'an kuma 14,410 gahu Hogganaan Qophii Ittisa Balaa Godinichaa Aab Liiban Kabbadaa BBC'tti himan.
Ulaagalee Fifa’n kaa’ame ni guutuu Istaadiyeemonni jedhaman, kallattiwwaan afran biyyatti keessatti ijaaramaniiru, ijaaramaa jirus yeroo jedhamu si’a hedduu dhageenyeerra.
Poolisiin duraanii Afrikaa Kibbaa Naa'oomii Roozemeerii Nidlovu firoota ishee shanii fi hiriyaa dhiiraashee ajjeesuun murtiin balleessaan irratti murame.
Ministirri Haajaa alaa US, Antoonii Bilinken dhimma Itoophiyaa fi Afgaanistaan irratti barreessaa ol aanaa UN Antoniyoo Guutires waliin dubbachuu ministeerri Haajaa Alaa US beeksise.
Haleellaan xiyyaaraa torban kana keessa qofa guyyaa afraffaaf guyyaa har'aa magaalaa Maqalee keessa raawwatuu mootummaafi finciltoonni Tigtraay himan.
Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Jibaatitti namichi bofa kukkutee hojii tolchaa ykn moraaf mana namaa keessa utuu awwaaluuf yaaluu argame to’annoo jala oole.
Gosti Pooliyoo tokko babal'annaan Itoophiyaan duula talaallii eegalte
Bara 2017'tti biyya beekamtii Pooliyoorraa bilisa jedhu argattee turte Itoophiyaa keessatti dhibichi deebi'ee waan babal'ateef talaalliin Pooliyoo naannoo Oromiyaa keessatti kennamu eegale.
Miidiyaan hawaasaa guddichi, Feesbuuk, Waraana Bilisummaa Oromoo fi qabiyyeewwan isa leellisan haquu addatti BBC'f mirkaneesse.
Mormitoonni Sudaan wal morman daandii Kaartumitti bahan
UN waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf irra deebiin gaafate
Har'a Arsenaal v Aston Villaa- Morkii Piriimer Liigii torban kana eegaman
Warseessi adii lafarratti hafteefi hormaataaf tajaajilaa turte soorama baate
Naannolee Amaaraa fi Affaar waraanni akka haarawatti keessatti eegale keessatti dabalataan namootni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru.
Naannoo Amaaraa dhiyeenya magaalaa Kombolchaatti sochiin waraanaa jabaan jiraachuufi dargaggoonni meeshaalee akka qottoofi gajaraan osoo hin hafiin adda waraanaatti duulaa akka jiran gabaafame.
Namoonni naannoo Amaaraa bakkeewwan TPLF to'atee jirurraa buqqa'uun magaalota Kombolchaa fi Dassee jiran loltoota mootummaa fi TPLF gidduutti dararamaa jiru.
Haleellaa Wucaaleetti finciltoonni Tigraay raawwataniin lubbuun namoota nagaa 30 olii darbuu Ministeerri Haajaa Alaa yoo ibsu, aanga'aan naannichaa ammoo namootni sagal ajjeefamuu mirkaneessan.
Magaalaan guddoo naannoo Tigraay, Maqaleetti Wixata guyyaa keessa haleellaan qilleensarraa raawwatamuu maddeen gara garaa ni mul'isu.
Bulchiinsi Godina Walloo Kibbaa lola akka haaraatti eegale hordofee hunduu humna qabuun akka gumaacha taasisu waamicha dhiheesse.
'Kibba Walloo Wucaaleetti finciltoonni Tigraay lammilee nagaa 30 ajjeesan' - Mootummaa
Mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen TPLF tibba kana haleellaa haaraa naannolee Affaariifi Amaaraa keessatti banee uummata hedduu miidhaniiru, hawaasni idila addunyaa ammoo TPLF'f loogu jechuun komate.
Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa waraana guyyootaan dura akka haaraatti eegale jedhame, kan jalaqabe finciltoota TPLF jedhe.
Joo Baayidan fi Uhuuruu Keniyaattaan waldhabdee Itoophiyaa karaa nagaan furuun akka barbaachisu akeekan.
Kaaba Itoophiyaa, naannoo Tigraay keessatti namootni beela’an jiraatanis, anga’oonni dhaabbilee gargaarsaa idil-addunyaa beelli jira jedhanii labsuuf lafarra harkifataa jiru jechuun barreessa Aleeks Di Waal.
Bara 1996 barattoota Oromoo Yunivarsiitii Finfiinnee mormii dhageessisuu isaaniif ar'iaman 300 ol keessa tokko kan ta'e obbo Jaafaar Mitikkuu waggaa 20 booda barnoota isaa xumure.
Haleellaan Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horro Guduruutti raawwatamu gara walitti bu'iinsa sabaatti guddachuu akka malu Komiishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akeekkachiise.
Lammiin Ertiraa namoota daddabarsu Itoophiyaatii miliqe tarree Neezerlaadis namoota dhiimmitee barbaaddu keessa galchite.
Rakkoo gogiinsaa Godina Booranaatti mudateen walqabatee turban darberraa kaasee namoonni miidiyaa hawaasummaarratti duula deggersaa gaggeessaa jiru.
Bona ykn hongee cimaa ummameen ummanni Booranaa horiin hedduun jalaa dhumee namoonni kuma 200 ol ta'an gargaarsi nyaataa barbaachisuu bulchaan godina Booranaa Aab Jaarsoo Boruu BBCtti himan.
Jijjiirama qilleensaa qolachuun rakkoo dhala namaa fi dachee mudatee jiru isa hamaadha. Akka carraa ta'ee garuu sammuun rakkoo kanaaf fala qoru ulaa addunyaa guutuu keessaa tattaafataa jira.Furmaata nuti hin eegne hedduu qabatanii as ba'aa jiru.
Qabsoo Oromoo fi siyaasa Itoophiyaa keessa waggoota hedduuf kan turan namni siyaasaa gameessi Obbo Leencoo Lataa, namoota Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) hundeessan keessaa tokko.
Hogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Hayiluu Addunyaa BBC'tti akka himanitti haleellaan Harootti mudate gocha ergamtoonni TPLF raawwatanidha.
Erga balaan sun mudate as yeroo duraatiif Illenii, Zaaraa fi Karim bakka tokkotti gama Zoom'n akka haasawan mijeessineef.
Ministirri Haajaa Alaa duraanii US Kooliin Pooweel Covid-19'n du'an
Namni Afrikaa-Ameerikaa jalqabaa Ministira Haajaa Alaa US ta'uu danda'an Kooliin Pooweel ganna 84'tti sababa Koronaan lubbuun isaanii darbe.
Itoophiyaatti namoota COVID'n du'an kuma jaha ta'an keessaa kan talaalame tokko qofa
Weerarri Koronaa gosa Deeltaa kan itti hammaachaa jiru Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii saffisaan dabalaa kan jiru yeroo ta'u kanneen keessaa kan talalamee du'e nama tokko ta'uu Ministeerri Fayyaa ibse.
Namtichi kanfaltii Covid argachuuf du'a ofii akkeesse hidhaan adabame
Namichi maqaan Deevid Staveley jedhamu kun daldaloota gurguddoo afur qaba jedhee sobaan beeksisuun, sagantaa mootummaarraa qarqaarsa doolaara $544,000 argachuuf yaalii godhe.
Indiyaan nama tokkoon tokkoo Koovidiin du’e maatiif beenyaa kaffaluuf
Manni murte Olaanaa Indiyaa murtee mootummaan du’a koronaavayirasiin mudate tokkotti maatiif rupii 50,000 (doolara 674) kaffaluuf murteesse raggaasise.
5 Onkololeessa 2021
Itoophiyaatti koroonaavaayirasiin hammaachuun Hospitaala Eekkaatti sireen ciisichaa guute
Itoophiyaatti Weerarri Koronaavaayirasii hammaachaa waan jiruuf kutaa yaala cimaa fi sireen hundi dhukkubsattootan qabameera jedhe Hospitaalli Eekkaa Kotobee.
2 Onkololeessa 2021
Daa'imni ganna 12 abbaasaa mana murtiitti falmuun mirga talaallii Covid fudhachuu argate
Talaalliin carraa mucaan kun vaayirasicha maanguddoo kaansarii hamaan dhukkubsatan kanatti dabarsuu hir'isa jedhan abbaan seeraa dhimmicha harkaa qaban.
Gosti Covid-19 Deltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argame - Ministeera Fayyaa
Saffisa baayyee ol-aanaaa ta'een kan tatamsa'uufi baayyee hamaadha jedhame gosti koronaavayirasii Deltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argamuu ministeerri fayyaa beeksise.
7 Fuulbaana 2021
Ingilaanditti reeffii daa’ima ganna shanii laga keessatti erga argamee booda, mucaan ganna 14, ajjeechaa isaan himatame.
CAF dirree taphaa biyyaan alaa barbaaddadhu jechuun Itoophiyaatti hime
Itoophiyaan dorgommiiwwan sadarkaa idil-addunyaa gaggeessuudhaaf kan ishee dandeessisu istaadiyeemii hunda guuttate hin qabdu jedhame.
Ingilaand fi Weels keessatti haadholiin maqaa ammayyawaa jabana kanaa caalchisanii ijoollee isaaniif akka moggaasan ragaaleen ni agarsiisu.
Dargaggoo Qaro- dhabeessa, dhagahuu fi dubbachuu hin dandeenye gundoo hodhuun jiraatu. Magaalaa Bishooftuu keessa kan jiraatu dargaggeessi ganna 28 Natsaannat Asaffaa, hanga wagga 10 guututti qaamaa guutuu kan qabu ture. Seenaa isaa guutuu dubbifadhaa.
Mootummaan UK qorannoo durbummaafi wal’aansa durbummaa deefachuu(hymenoplasty) jedhamuun beekamu Inglaanditti yeroo gabaabaa keessatti akka dhorku waadaa seene.
Atileetiin Neezarlaand dhalattuu Itoophiyaa taate Siifan Hasan, Olompiikii Tookiyoo ji’oota muraasaan dura adeemsifame irratti meedaaliyaa sadii argatteetti.
Keeniyaatti namichi 'daa’imman 10 ol ajjeese' miliqe, reebamee ajjeefame
Poolisiin akka jedhutti miliquu nama kanaa kan baran ganama yeroo maqaan waamamu ture.
Daa’imni umuriinsaa waggaa 2 tahe kun, shugguxii abbaasaa Voondre Eevirii korojoo ijoollee keessatti argatee, utuu harmeen isaa Shamaayaa Liin karaa viidiyoo interneetaan walga’iirra jirtuu dhukaasee ajjeesuu isaa poolisiin ibseera.
Lammiin Indiyaa haadha warraasaa bofa hiddisiisee ajjeese adabame
Lammiin Indiyaa haadha warraa isaa bofa kobiraa hiddisiisuun ajjeese haala hin baratamneen hidhaa umrii guutuu dacha(si’a lamaatu) itti murame.
Meeshaaleen wanbadee beekamaa doolaara miiliyoona sadiin gurguraman
Meeshaaleen faddaalaa beekamaa Ameerikaa Al Capone Kaalifoorniyaatti Sanbattan darbe caal-baasiidhaan gurguramuun doolaara miiliyoona 3 sadii argamsiisan.
Barattoonni Yuniversitii Finfinnee damee barnootaa Faarmaasii baratan Afur maqaa Beta Blockers Initiative jedhuun pirojektii nyaata madaalawaa garbuu fi baaqilaa irraa qopheessu eegalaniiru.
Akkuma umriin keenya dabalaa adeemu fedhiin, waan dursi kenninuufi barmaanni soorata keenyaas jijjiramaa adeema.
Gameessi tokkummaa Keeniyaa maqaan ka'u Daawudi Dabbasoo Waaberaa eenyu?
Seenaa jireenyaafi ajjeechaa Gameessi tokkummaa Keeniyaa keessatti maqaan ka'u Daawudi Dabbasoo Waaberaa.
Tomaas Saankaaraa: 'Che Guevara Afrikaa' eenyutu ajjeese?
Ajjeechaa Pireezidantii Burkinaa Faasoo duraanii Tomaas Saankaaraa waggaa 34'n dura raawwate duuba, namoonni 14 ajjeechaa isaa keessa qooda qabaachuun shakkamanii dhaddacha fuuldura dhiyaachuun dhimmi isaanii ilaalamaa jira.
Waa'ee naannoo Uummatoota Kibba Lixa Itoophiyaa hagam beekna?
Godinaaleen Oomoo lixaa, Beenchi Shakkoo, Kafaa, Daawuroo fi Shakkaa akkasumas aanaan addaa Kontaa ALI Fulbaana 20, 2014 filannoo riifarandamii gaggeessuun, sagalee naannoo ta'uuf isaan dandeessisu kennaniiru.
Magaalaa sirni alaabaa fannisuu fi buusuu ummataan itti aadeeffame
Magaaloota biyyattii umurii dheeraa qaban keessaa tokko kan taate Daseetti alaabaa kabajaan adabaabaayii irratti fannisuufi buusuun waan barameedha.
11 Onkololeessa 2021
Gaandii haga Abiy Ahimad: Badhaafamtoota Noobeelii Nagaa falmisiisoo jahan
Sababii umama siyaasaa isaatiin, erga bara eegalamee 1901 irraa qabee badhaasichi yeroo baayyee madda falmii ture. Isaan keessaayis filmaanniwwan badhaasichaa hedduu walfalmisiisaan muraasaa fi badhaasa hafuun yaadatamu tokko kunooti.
Erga hogganaan duraanii Liibiyaa Muhaammar Gadaafii Onkololeessa 2011tti gartuu finciltootaan ajjeefamee booda waa’ee isaa wanti baay’een dubbatamaa fi barreeffamaa ture. Haata'u malee, wa’ee eegdoota isaa dubara qofa ta’anii imala isaa hunda irratti waliin turan wanti jedhame baayyeen hinturre.
28 Fuulbaana 2021
Nama warri Lixaa 'hedduu hamaa', biyyi isaa ammoo 'abbaa Niikuleeraa' jedhaniin
Basaastonni biyyoota Lixaa AQ Khaaniin akkuma Bin Laandaniitti nama balaafamaa jechuun waamuun. Garuu ammoo Paakistaan keessatti baayyee akka gootaatti isa ilaala.